Zaporozhye State University Medical - Fianarana Mbbs in Ukraine
Zaporozhye State University Medical Details
fanafohezan-teny : ZSMU
Créé : 1903
Aza adino ny hadihadio Zaporozhye State University Medical
Ampiharo ny Zaporozhye State University Medical
Inona no tena tanjon'ireo ny Zaporozhye State University Medical dia ny hanomezana fitsaboana fampianarana ambony ho an'ny Specialist ny, Licence sy Mpampianatra ny diplaoma, ary koa ny fampiofanana, nahazo diplaoma teny amin'ny internship, mastership, fianarana, nahazo diplaoma teny, honina sy ny fampahatsiahivana ho an'ny dokotera sy ny antokony pharmacists.
Misy 7 Fahaizanareo amin'ny Zaporozhye State University Medical (Medical Faculty No. 1, Medical Faculty No. 2, fanafody roa mandingana (intramural sy extramural), International Faculty No.1, International Faculty No.2, Faculty ny, nahazo diplaoma teny Fanabeazana), Medical College sy University Clinic for 160 marary ary 250 fizaham-pahasalamana amin'ny polyclinic.
Ny fiofanana ao amin'ny Anjerimanontolon'i ahitana mialoha oniversite, undergraduate sy ny vanim-potoana, nahazo diplaoma teny amin'ny fianarana. Mpianatra avy any ivelany no niofana tao amin'ny Iraisam-pirenena ho an'ny fanampiny Faculty No.1 fianarany ao amin'ny toeram-pianarana ambony kokoa Okraina.
Nandritra ny fiofanana tao amin'ny University Okrainiana sy ny vahiny na ireo mpianatra mahazo fampianarana ambony ho an'ny Specialist ny sy ny diplaoma Master ("General Fitsaboana", "Pediatrics", "Dentistry", "Pharmacy", "Teknolojia ny mpangaroharo zava-manitra Cosmetic fanomanana").
Fanabeazana, nahazo diplaoma dia ahitana fiofanana amin'ny internship, mastership sy ny fianarana, nahazo diplaoma teny amin'ny 29 specialties, in doctorat firotsahany hofidiana - in 12 specialties, ary koa ny fampahatsiahivana ho an'ny dokotera sy ny antokony pharmacists.
10200 mpianatra, postgraduates, interns, mpianatra ny fampahatsiahivana taranja, mpampianatra-probationers, tompo sy ny pitsaboana mponina mianatra ao amin'ny University. Misy mihoatra noho 1800 mpianatra vahiny avy amin'ny 42 firenena tao amin'ny University. 1024 mpianatra dia ampianarina amin'ny teny anglisy. Ny University Nahazo fahefana sy fankasitrahana amin'ny alalan'ny fampiofanana olom-pirenena vahiny avy any Asia, Africa, Americaand Latina Eoropa bebe kokoa noho ny 40 taona. About 10500 manam-pahaizana no nahazo fitsaboana sy fanafody fanabeazana sy miasa ankehitriny ao amin'ny mahery 100 firenena eto amin'izao tontolo izao, maka toerana ambony ao amin'ny rafitra fahasalamam-bahoaka ny firenena.
Ao amin'ny University Medical Zaporozhye State mpianatra hahazo fahalalana momba ny fitakiana ny Eoropeana rafitra ny fanabeazana. Ny fandaharam-pianarana akademika dia miorina amin'ny tsara indrindra modely ny teratany sy ny vahiny fampiharana ny manam-pahaizana manokana 'fampiofanana.
mpianatra, bachelors, interns, tompony, postgraduates, mpampianatra miasa ny dokotera mari-pahaizana ary koa ny mpianatra ny fampahatsiahivana taranja fianarana amin'ny 59 departemanta. 56 departemanta dia tarihan'ny Profesora / Doctors ny siansa, 3 departemanta dia tarihan'ny Associate Profesora / PhDs. Ny fiofanana dia tanterahina amin'ny fampiasana ny tena maoderina siansa sy ny teknolojia pedagojika.
Misy 676lecturers tao amin'ny University in 2014: 120 Mpampianatra sy ny Doctors ny Siansa, 444 Miaraha mpampianatra sy PhDs dia mirotsaka amin'ny siansa-pedagogic asa. Misy Mifandanja iray mpikambana ao amin'ny National Akademia Momba ny Siansa any Ukraine, 46 Iraisam-pirenena mpikambana ao amin'ny akademia ny Siansa sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Scientific, 8 Boninahitra Siansa sy Engineering mpiasa any Ukraine, 1 Boninahitra mpiasa amin'ny Sekoly Ambony Momba ny Okraina, 4 State Loka mpandresy, 5 Loka mpandresy ny Okrainiana Akademia Medical Siansa, 1 Loka National Academy Mpandresy avy ny Siansa sy ny Medical Academy ny Siansa atao hoe aorian'ny V.P. Komisarenko, 1 Loka Mpandresy ny Filohan'ny Ukraine, 2 Loka Mpandresy ny Cabinet ny Ministeran'ny Ukraine, 3 Boninahitra Dokotera Ukraine teo aminy.
Ny ara-tsiansa sekoly ao amin'ny University dia fantatra tsara ivelan'ny Ukraine. ny fo izahay, fandidiana, fanafody sekoly eo aminy. Sambany tao Ukraine ny manam-pahaizana manokana ny Zaporozhye State University Medical efa nahavita nanao ny transplantations am-po. Mihoatra ny 500 transplantations ny aty, voa sy ny sarakaty no nanao. Mihoatra ny 20 fiomanana efa niasa avy amin'ny mpahay siansa ny fanafody sekoly, vokatra ary nampidiriny ho ao an fitsaboana any amin'ny tany maro any ivelany. Ny vokatry ny asa ara-tsiansa dia tatitra amin'ny sehatra fiadian-kevitra iraisam-pirenena tany Soeda, Repoblika Tcheky, Espaina, Holland, Brezila sy Aotrisy. Ny University manana ny siansa fanontana: “Zaporozhye Medical Journal”, “Current olana in levitra sy ny fitsaboana:siansa sy ny fampiharana”, “aretina”.
Misy foto-drafitr'asa mandroso ny siansa tao amin'ny Oniversiten'i vondrona anisan'izany ny SRI (Scientific Research Institute ) ny fitsaboana sy ny tontolo iainana olana, Institute ny pitsaboana aretina ny olona, SMA "Pharmatron", foibe fikarohana siantifika laboratoara, fanamarinana-mizaha toetra laboratoara ny ditin-kazo manitra sy ny tarehy fiomanana sy ny tokantrano vokatra, sampan-draharaha ny doctorat firotsahany hofidiana sy ny fianarana, nahazo diplaoma teny, famoahana famoahana sampan-draharahan'ny, Center ny Informatika sy ny fandalinana fanohanana sy fitiliana, patanty sampan-draharahan'ny, fikarohana siantifika division, drefy service. Scientific Research Institute sy ny laboratoara ireo fitaovana amin'ny toerana tsy manam-paharoa ho an'ny nitarika fototra sy nampihatra fikarohana siantifika.
Misy manokana Filankevitra Ambony teny vavolombelon'Andriamanitra Vaomieran'ny ho fiarovana ny Kandidà sy ny Dokotera diplaoma in samihafa voatokana. 30 taratasy misy hevitra for Dokotera ny mari-pahaizana amin'ny 23 voatokana sy 143 taratasy misy hevitra ny Kandidà ny mari-pahaizana amin'ny 35 specialties no niaro tao amin'ny University nandritra ny dimy taona farany. 35 taratasy misy hevitra ny Dokotera ny ambaratonga sy ny 137 taratasy misy hevitra fa ny mari-pahaizana Kandidà tanteraka no nihinana ny Oniversite araka ny drafitry ny fanomanana ny siansa sy ny manam-pahaizana manokana pedagojika. Mamoaka ny University potoana ara-tsiansa sy azo ampiharina gazety:"Zaporizhzhia gazety ara-pitsaboana", "Aretina", "Current olana amin'ny levitra sy ny fitsaboana:siansa sy ny fomba fanao ", 10-15 Rehetra-Okrainiana sy ny fikarohana siantifika-azo ampiharina amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena no natao ny fandraisana anjara isan-taona.
Ny fampidirana ny solosaina teknolojia ho any amin'ny fampianarana-fianarana dingana, fikarohana siantifika sy ny fitantanana dia iray amin'ireo laharam-pahamehana-entin'ny University ny asa. 42 solosaina efitrano fianarana ary 1300 PC manome fandaharam-pianarana akademika mpianatra amin'ny miorina amin'ny haino aman-jery ny teknolojia sy ny fitiliana fanaraha-maso ao amin'ny tena fitsipika. ZSMU manana ny Internet mpizara vaovao. Misy ivon'ny telemedicine sy lavitra ny fianarana ao amin'ny Anjerimanontolon'i izay manome ny fandraisana anjara amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena ara-tsiansa natao miorina amin'ny videoconference teknolojia, fandaminana sy ny fitazonana ny fomba siantifika-videoconferences, fandaminana ny lavitra fampahatsiahivana taranja ho an'ny fampianarana University mpiasa, fampiasana ny teknolojia ao amin'ny fanofanana lavitra ny mpianatra amin'ny alalan'ny taratasy.
Zaporozhye State University Medical dia mpandray anjara avy amin'ny iraisam-pirenena fandaharana Tempus. Araka ny hanome TEMPUS IV University no manatanteraka ny fandaharana iraisam-pirenena «Fametrahana ny supra-paritra Network ny National Foibe in Medical Education, nifantoka tamin'ny PBL sy ny Virtual marary », collaborates amin'ny teny ekena foibe Canadian College amin'ny teny anglisy (Vancouver, Kanada) mba hanatsara ny teny anglisy ao amin'ny aterineto mode.ZSMU nanao sonia fifanarahana eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Kirov State Medical Academy, West Kazakhstana Marat Ospanov State University Medical, Andijan State Medical Institute (Uzbekistan), Astana University Medical (Kazakhstana), Karaganda University Medical (Kazakhstana), Aristote University in Thessaloniki (Gresy), St. George University of London (Grande-Bretagne), Akaki Tsereteli State University (Georgia), David Tvildiany University Medical (Georgia), Wroclaw University Medical (Polonina), Palacky University in Olomouc (Repoblika Tcheky), ny University of Nicosie (Sipra), I.M. Sechenov Voalohany Moscow State University Medical (Rosia), Grodno State University Medical (Belarosia), RīgaStradiņš University (Letonia),Pyatigorsk fanafody Institute (Rosia), Plovdiv University Medical (Bolgaria), Litoanianina University of Health Sciences (Litoania).
Zaporozhye State University Medical maka iray amin'ireo toerana voalohany ao Okraina amin'ny teknika-ara-nofo mpisolo. Ny voninahitra ao amin'ny University dia ahitàna ny fisian'ny fampiofanana manokana ny trano. Zaporozhye State University Medical dia iray amin'ireo vitsy toeram-pampianarana ambony fitsaboana tany Okraina izay manana ny foibe fanofanana-siansa "University Clinic" izay azo ampiharina kilasy no nitarika sy fitsaboana dia hatolotra. Ny University manana ny fitaovana tsy manam-paharoa: solosaina tomographs, fitaovana ho an'ny ultrasonic aretina, angiographic sy endoscopic safidy, radioisotope aretina sy ny maro hafa mba hitarika fototra sy nampihatra fanadihadiana siantifika.
Misy iray famakiam-boky elektronika sy ny elektronika katalaogy eo amin'ny ara-tsiansa famakiam-boky ao amin'ny University. Ny mpampiasa dia manana fahafahana hahazo ny elektronika banky angona 'ny famakiam-boky, ary afaka manatanteraka ny fikarohana avy amin'ny solosaina mifandray amin'ny Internet, ary mahazo texte-boky.
Zaporozhye State University Medical mijery toy ny mpianatra toeram-pianarana tsara tarehy teo amoron'i Neily Dniepr, renirano lehibe indrindra any Eoropa. Izy io dia tafasaraka faritany izay misy 5 akademika trano, 5 tranom-bahiny, siansa sy ny trano famakiam-boky vita an-tsoratra belletristic amin'ny famakian-teny sy ny solosaina efitrano efitra, foibe ara-pahasalamana, mpianatra ny toeram-pitsaboana-tobim-pahasalamana, canteens maro sy trano fisotroana kafe, fanatanjahan-tena foibe, fitsarana sy ny kianja. Misy mpankafy zavakanto Club ho an'ny mpianatra izay mazoto amin'ny mihira, nibitaka sy nitsinjaka zavamaneno. Okrainiana ara-tantara sy ara-kolontsaina antoko, fety iraisam-pirenena fisakaizana, fifaninanana antoko no natao tao ZSMU.
Rehetra akademika trano, tranom-bahiny, famakiam-boky siantifika afaka mampiasa Internet. Misy Wi-Fi hevitra fidirana amin'ny faritanin'i ny University. Ny mpianatra dia eo ambany fonenan'ny mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i fiarovana manodidina-the-famantaranandro. Ny fonenan'ny mpianatra sy tranom-bahiny dia fitaovana ny fomba fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso lahatsary.
Fidirana dingana in Zaporozhye State University Medical
Fa mihatra amin'ny Zaporozhye State University Medical mpianatra vahiny tsy maintsy mampihatra-tserasera Okrainiana fieken-keloka amin'ny alalan'ny Center.
General Medicine. fahaizana: MD Mpanao fanafody. Training teny – 6 taona.
Pediatrics. fahaizana: Mpanao fanafody. Training teny – 6 taona.
Laboratory diagnostics. fahaizana: Laboratory mpanampy licence. Training teny 4 taona.
Nursing. fahaizana: Medical mpitsabo mpanampy licence. Training teny 4 taona. Tamin'ny fanafody sampam-pianarana ireo mpianatra no nampiofanina ny specialties:
Pharmacy. fahaizana: Pharmacist. Training teny 5 taona.
Teknolojia ny ditin-kazo manitra-tarehy preparations.Qualification: Pharmacist cosmetologist. Training teny 5 taona.
Ny tantaran'ny Zaporozhye State University Medical dia niverina ho any amin'ny vehivavy Pedagogic Courses nokarakaraina tao Odessa in 1903.
In 1921 ny Courses dia averina alamina any an-Simika-fanafody Institute.
In 1935 dia anatro tao amin'ny panjakana fanafody Institute. In 1941 ny fiainan'ny Institute dia nanapaka ny Lehibe Patriotic ady mandra- 1944.
In 1959 ny fanafody Institute nafindra avy tany Odessa ho Zaporozhye sy anarana ao Zaporozhye fanafody Institute.
In 1964 ny Medical Faculty dia nisokatra sy 1968 Zaporozhye fanafody Institute no anarana an-Zaporozhye Medical Institute.
In 1975 Zaporozhye Medical Institute nahazo ny toerana misy ny Institute ny sokajy voalohany.
In 1994 ny Institute dia averina alamina ho Zaporozhye State University Medical ny IV (an-tampon'ny) ambaratonga ny fankatoavana.
Ankehitriny dia ny iray amin'ireo mpitarika Anjerimanontolo-pitsaboana ao amin'ny tontolo ara-pitsaboana fanabeazana ny Ukraine. Efa lasa foibe fanofanana ho an'ny fitsaboana sy fanafody ho an'ny manam-pahaizana manokana avy any ivelany Ukraine sy ny firenena.
Ianao ve mila hadihadio Zaporozhye State University Medical ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Zaporozhye State University Medical amin'ny Map
Photos: Zaporozhye State University Medical ofisialy Facebook
Zaporozhye State University Medical Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Zaporozhye State University Medical.
Technical National Institute University Kharkiv Politeknika Kharkiv
Vinnytsia National University Medical Vinnytsia